RASMI: Nemanja Matic oo heshiis cusub u saxiixay Kooxdiisa Manchester United – Gool FM
(Barcelona) 06 Luulyo 2020. Nemanja Matic ayaa heshiiska u kordhiyey kooxdiisa Manchester United, waxaana uu qalinka ugu duugay qandaraas cusub oo ku eg sanadka 2023-ka.
Bayaan ay soo saartay kooxda ayaa lagu sheegay in Manchester United ay ku farraxsan tahay inay ku dhawaaqdo qandaraaska cusub ee uu saxiixay Nemanja Matic, kaasoo kooxda ku sii hayn doona illaa bisha June ee sanadka 2023-ka.
Matic ayaa ku soo biiray kooxda Man United sanadkii 2017-kii, waxaana uu kooxda u saftay 114 kulan, halka xulkiisa qaranka Serbia uu metelay 48 kulan.
Isagoo ka hadlayey heshiiska cusub oo uu saxiixay Nemanja Matic waxa uu yiri: “Aad ayaan ugu farraxsanahay inaan sii wado inaan qeyb ka sii ahaado kooxdaan weyn”
“Ciyaaryahan ahaan, weli waxaan hayaa wax badan oo aan ku bixiyo oo aan ku gaaro mustaqbalkeyga ciyaareed iyo in aan ku sameeyo Manchester United sharaf weyn ayey ii noqon doontaa.”
“Tani waa koox runtii xiise u leh inay qayb ka noqoto, waxaan leenahay isku dheelitirnaan wanaagsan oo xagga dhalinyarada ah iyo waaya aragnimo kooxda ah, waxaana jira xiriir weyn oo dhexmara xiddigaha kooxda.
“Tani waa qeyb muhiim ka ah xilli ciyaareedka si fiican ayaanna u ciyaareynaa, waxaan sii wadi doonnaa dagaalka si aan xilli ciyaareedka ugu dhammeysanno meel sare oo aan ka dhigno taageerayaasheena kuwo cajiib ah. ”
Dhinaca kale Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa dhankiisa sheegay inuu ku farraxsan yahay heshiiska cusub ee uu saxiixay Nemanja, waxaana uu xusay inuu kooxda ku caawin doono qibraddiisa iyo hoggaamiyenimadiisa xirfadlenimo.
"Lionel Messi waxa uu xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabayn doonaa Barcelona" – Madaxweyne Bartomeu